Ukutya okungalunganga kweekhalori: Ngaba yinyaniso okanye yintsomi? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ininzi ephawulwe yi-dieters, igama elibi iikhalori ligama elisetyenziselwa ukwahlula ukutya okuneekhalori ezimbalwa kunokuba zichitha ukwetyiswa. Kodwa ngapha koko, ngaba kunokwenzeka ukuba kukho ukutya okunexabiso elibi le-caloric?
1 Qonda iikhalori ezingalunganga
2 Ukutya okanye ukunciphisa umzimba
3 Iikhalori ezingalunganga okanye i-thermogenic
3.1 Imizekelo yokutya kwe-thermogenic:
Qonda iikhalori ezingalunganga
Kukho ukutya okunexabiso eliphantsi kakhulu leekhalori ekwakhiweni kwazo. Ziyaboniswa kukutya ukunciphisa umzimba ngenxa yokuba ziqulathe isixa esisezantsi seecarbohydrate kunye namafutha, isixa esikhulu samanzi kunye nokusebenzisa iikhalori eziza kwenziwa ngumzimba xa usetyisa. Kuya kulunga xa kunokutya okuninzi okutyayo ikhalori, kunye nokuhlafuna, ukugaya kunye nokufunxa iinkqubo, kuneekhalori zakho. Nangona kunjalo, akukho zifundo zingqina le thesis.
Uluvo lokuba kukho ukutya okungekhoyo kwiikhalori, enyanisweni, kulinga kakhulu. Akumangalisi ukuba into enje ithandwe kangaka; emva kwayo yonke loo nto, abantu bahlala bejonga izisombululo ezikhawulezayo nezilula kwiingxaki zabo. Nangona kunjalo, oku kutya kungummangaliso kungqineke ukuba akukho nto ingeyiyo intsomi.
Ivatala kunye nekhukhamba, umzekelo, ziye zaduma ngokuba neekhalori ezingalunganga kuba zityebile emanzini ekwakhiweni kwazo, kunye nokuba nefuthe lomchamo kunye nexabiso eliphantsi lekhalori.
Ukutya okanye ukunciphisa umzimba
Ihlobo limkile, ihlobo liza kwaye uhlala unokutya okuthenjisiweyo njengommangaliso wokulahleka kobunzima. Kodwa kuyakuba kukuba okunye ukutya kunako, kukodwa, kukhuthaze ukwehla kobunzima.
Ngapha koko, le nkqubo iyinkimbinkimbi kwaye iyahluka ngokwento leyo iphilayo, ke ngoko, isiphumo sezinto. Ukutya, kukodwa, akunako ukukhuthaza ukwehla kobunzima. Nangona kunjalo, ezinye iti kunye nezinongo, ezinje ngepelepele, ijinja, iti eluhlaza, icaffeine (ikofu) kunye nesinamon, ukuba ifakwe kwisondlo esilungeleleneyo, inokunyusa ukunciphisa umzimba.
Iikhalori ezingalunganga okanye i-thermogenic
Ngokungafaniyo nokutya okungafunekiyo kwekhalori, kukho ukutya okune-thermogenic. Ngabo banakho ukukhawulezisa imetabolism, ukuba lihlakani elikhulu kwinkqubo yokunciphisa umzimba. Nangona kunjalo, oku kutya kufuneka kuhlala kunxulunyaniswa nokutya okunesondlo ukuze kusebenze.
Imizekelo yokutya kwe-thermogenic:
Ipelepele ebomvu: Ikhompawundi inegunya lokunyusa isiseko semetabolism;
Itiye elihlaza: isityebi kakhulu kwii-antioxidants kunye ne-caffeine, esetyenziselwa ukunceda ukunciphisa umzimba, ukwandisa imetabolism;
Ujinja: ikhawulezisa imetabolism, ukongeza ekuvuseleleni ukutshiswa kwamafutha;
Isinamoni: yi-hypoglycemic ukongeza ekuphuculeni amajoni omzimba;
Ikhafeyini: Unceda ukutshisa amanqatha.